မမသီရိ: May 2009
ဖီဒဲလ် ကပ်စထရို၏ ကမ္ဘာကျော်လျှောက်လဲချက် အပိုင်း (၃)
ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ ဒီလျှောက်လဲချက်ရှည်ကြီးကို ကပ်စထရို တင်သွင်းစဉ်က သူ့ အသက် ၂၇ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလျှောက်လဲချက် မိန့်ခွန်းရှည်ကြီးဟာ အဲဒီခေတ်တုန်းဆီက လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ကိုလိုနီ တိုင်းပြည်တွေက လူငယ်တွေ နဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေအတွက် တန်းဖိုး ကြီးလှတဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ အဆိုအမိန့်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေ အုပ်စိုးနေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက အစိုးရတွေ အတွက် ရှက်လန့်တကြား၊ ကြောက်လန့်တကြား ဖြစ်သွားစေခဲ့ တဲ့မိန့်ခွန်း ရှည်ဆိုလဲ မှားမယ် မထင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လျှောက်လဲ ချက်က ၅ နာရီကျော်ကြာ်ခဲ့တာ မို့ ကမ္ဘာပေါ် က အရှည်ကြာဆုံး လျှောက်လဲချက်တွေ ထဲက တခုအပါ အ၀င်ပါ။ ကျမအနေနဲ့ ကတော့ အဲဒီအထဲကမှ ကျမ နှစ်သက် တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပဲ ကောက်နှုတ်တင်ပြသွား ပါ့မယ်။ ဒီလျှောက်လဲချက်ရှည် ကြီးကို English လို မူရင်းအတိုင်း ဖတ်ချင်ရင်တော့ ကျမတင်ပြထားခဲ့တဲ့ အပိုင်း (၂) မှာ မှတ်ချက်ဝင်ပေးသွားတဲ့ ကိုမျိုးမြင့်မောင် ရဲ့ မှတ်ချက်ထဲက အတိုင်း ဒီမှာ (http://www.marxists.org/history/cuba/archive/castro/1953/10/16.htm) သွား ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမယ်၊ ကပ်စတရိုရဲ့ လျှောက်လဲချက်က စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ နိုင်ငံပြန်လည်တည်ထောင်ရေး၊ စသဖြင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက တင်ပြပေးထားတာမို့ အတော့်ကိုရှည်တာပါ.. လျှောက်လဲ ချက်တခု လုံးက လဲ အဓိပါယ်ပြည့်ဝ နေတော့ တချို့ကို အကျဥးချုံးဖို့တောင် မနည်းစဉ်းစားနေရပါတယ်၊ ပြီးတော့ အချိန်အခက်အခဲ ကြောင့် ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း တင်ပြပေးနေရတာ နားလည်ပေးကြဖို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ စောင့်ဖတ်ပေးကြတာ လဲ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်..။
Posted by မမသီရိ at 5/20/2009 07:24:00 PM
ဖီဒဲလ် ကပ်စထရို၏ ကမ္ဘာကျော်လျှောက်လဲချက် အပိုင်း (၂)
Posted by မမသီရိ at 5/17/2009 06:41:00 PM
အပိုရှာ ဆောင်ကာ ထားပါရ
ပန်းမှုံကြုပ် ကို.. ၀ှက်တတ်နေတယ်..။
(တခါတုန်းကျမပြောဖူးတယ် ထင်ပါရဲ့.. ကျမဘယ်သွားသွားသယ်တဲ့အထဲမှာ.. စိတ်ကူးပေါ်တဲ့ အခိုက်တွေ ချချ ရေးထားမိတဲ့.. ကဗျာစာရွက် အတိုအစတွေ.. မှတ်စုစာအုပ်တွေ ပါတယ်ဆိုတာလေ..။ ခုတလော အလုပ်က အတော်လေးများနေတော့ စာတွေရေးဖို့ အာရုံစူးစိုက်လို့ မရနိုင်တဲ့ အပြင်.. အချိန်ကလဲ လုယူချိန်တောင် မရသလောက်ရှိနေတာမို့.. Tag ကြွေးတွေ တောင်မဆပ်အားပါဘူး.။ အွန်လိုင်းမှာ လာနှုတ်ဆက်သူတွေ ကိုလဲ အားနာနာ နဲ့ bye ပြောရတာ များနေပြီ.. ဒီကြားထဲ ..အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မှတ်တမ်းဟောင်းလေး တခု ပြန်ရှာရင်းနဲ့.. စာရွက်ဟောင်း နဲ့ မှတ်စု ဟောင်း ထုပ်ကြီး ဖွမိရက်သား ဖြစ်သွားတာမို့.. မနေ့ညက အိပ်ချိန် ၄ နာရီတောင် ပြည့်မယ်မထင်.. အပေါ်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ကဗျာလေးက အဲဒီစာရွက်ဟောင်းတွေထဲ က ထွက်ကျလာတဲ့ စာရွက်ပိုင်းလေးထဲက ကဗျာ တပုဒ်ပါ.. အဲဒီမှာ တပ်ထားတဲ့ နေ့စွဲက ၂၈.၅.၁၉၉၀ လို့ ရေးထားမို့.. တချို့ ဘလော့ဂါလေးတွေ မွေးကင်းစပဲ ရှိအုံးမယ်ထင်ရဲ့.နော်.. ဒီကဗျာ ဖတ်ပြီး အထင် ထပ်မကြီးဘို့ ကြိုပြောနေတာပါ...း)..။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေချာ တာ တခုကတော့ အဲံဒီအချိန် မှာ ရီးစား မရှိခဲ့တာ အသေအချာ...။ အဲဒီတုန်းက.လူကောင်ထွားထွားကောင်မလေးတွေအတွက်ဆိုရီးစားရနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့ သေးသေး ပုပုညှက်ညှက် ကျမအတွက်ကျတော့ ရီးစားဆိုတာ... ။
ရီးစား မရှိပဲ ဒီလိုကဗျာမျိုး ရေးနိုင်သလား လို့ မေးလာသူ ရှိရင်လဲ မေးခံရတာလွဲလို့ ကျမမှာ အဖြေမရှိပါ...။
အင်း.. ရီးစား ရှိနေတဲ့ ဘလော့ဂါ ညီမလေး အတွက်တော့.. ကွက်တိဖြစ်နေမလားပဲ ..နော်...း)... ဒါပေမဲ့ ဒီခောတ်ကြီးမှာက မပျက်နိုင်တဲ့ မိတ်ကပ်တွေ.. မပျက်နိုင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေ ရနေပြီ ဆိုတော့.. ကျမ ကဗျာလေးက ခောတ်နဲ့မှ ညီပါသေးရဲ့လား လို့...း)...။
Posted by မမသီရိ at 5/14/2009 08:52:00 AM
ဖွဲ့နှောင်လို့ ချစ်သူ မို့...
Posted by မမသီရိ at 5/11/2009 06:25:00 PM
30 Apr 09, 22:50
vanko: ရောက်ပါတယ် မမသီရိရေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
30 Apr 09, 03:53
meetaut: ကဗျာလေးကို ခံစားသွားပါတယ် ခင်ဗျာ
28 Apr 09, 23:42
kaungkinpyar: မမ မမ ချစ်မမ သီ၇ိ လွမ်းနေတယ်
28 Apr 09, 04:58
သမီးပျို: မမသီရိရေ ကဗျာအဟောင်းတွေခံစားသွားတယ်ဗျို့
27 Apr 09, 09:16
reenoemann: အမ မတွေ့တာကြာပြီနော်။ ကျွန်တော်ပဲ မရောက်လိုလားမပြောတက်ပါဘူးဗျာ
27 Apr 09, 02:56
meetaut: အလည်လာပါတယ် ခင်ဗျာ
27 Apr 09, 02:41
ဂင်ကြီး: ညီမရေ ရောက်ပါတယ် ခရီးလွန်နေတုန်းလား
26 Apr 09, 20:36
မင်းလွမ်းနောင်: မမသီရိရေ အလည်ရောက်ပြီး ကဗျာလေးကို ခံစားသွးပါတယ်
26 Apr 09, 18:45
Welcome: မင်္ဂလာပါ၊ အိမ်လည်ရောက် ပါတယ်
26 Apr 09, 18:44
26 Apr 09, 18:06
မိုးခါး: ချစ်မမရေ .. အလည်လာသွားတယ်နော် ..း)
26 Apr 09, 12:12
လူလ: မင်္ဂလာပါ မသီရီ၊ သုဘဒ္ဒါ ကို လွမ်းပြီး ပြန်သွား၏။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
26 Apr 09, 11:00
သမီးပျို: သနားလွန်းလို့ ငိုပြီးပြန်တွားတယ်
26 Apr 09, 05:36
boyz: >>့ပန်ဒိုရာ:>> အခြစ်ကဗျာ မတွေ့ ဘူး။ အခြစ်ကဗျာဆိုတာ ဘာလဲ.
26 Apr 09, 05:35
boyz: >>ပေါတာလေး>> ကံကောင်းပါစေဗျာ..
26 Apr 09, 05:34
26 Apr 09, 05:02
26 Apr 09, 04:41
kaungkinpyar: ရောက်တယ် ချစ်မမ သီရိ
26 Apr 09, 04:34
ThihaTHit: good luck
25 Apr 09, 18:01
ဝေါသားလေး: မမသီရိရေ... အချစ်ကဗျာလေးကို ထပ်တူခံစားသွားတယ်... ကံကောင်းချင်တယ်ဗျာ....
25 Apr 09, 12:30
ချစ်ပါးလုံး: ပါးလုံးဆီလည်းလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အချစ်ကြောင့်သာကိုလည်း ခံစားသွားပါတယ်။
25 Apr 09, 11:42
kaungkinpyar: မမ ပြန်မရောက်သေးပေမဲ့ tag မိပါတယ်၊ ပြန်ရောက်ပီး အချိန်လေးများရရင် ရေးပေးနော်
25 Apr 09, 08:11
ကျော်သိင်္ခ: ဘယ်လိုပီတိဖြစ်လဲဆိုတာ ကြည့်ဖို့ လာလည်ပါဦးလို့ ဖိတ်ပါရစေ။
25 Apr 09, 08:10
ကျော်သိင်္ခ: ကျနော့်ကောင်မလေးက ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ မမသီရိကို အားရပီတိ အဖြစ်ဆုံးတဲ့။
23 Apr 09, 07:48
့ပန်ဒိုရာ: အခြစ်ကဗျာလေး လာဖတ်သွားတယ်
22 Apr 09, 22:48
blackdream: ခြစ်ခြစ်...။ အစ်မတို့ပဲ ခြစ်ကြ
22 Apr 09, 06:50
21 Apr 09, 17:57
မိုးခါး: မမသီရိရေ .. အလည်လာတယ် ..း) ချစ်တတ်လိုက်တာ
21 Apr 09, 17:32
Win Zaw: မောနင်း၊ အိမ်လည် လာသွားတယ်
21 Apr 09, 09:40
နှင်း: ရောက်သေးဘူးလား။မမရေ ဘယ်မှာလဲ။
21 Apr 09, 07:39
သမီးပျို: သမီးပျိုဆို အရမ်းနမ်းပလိုက်မှာ အိမ်လာလည်နော်http://anglepyo.blogspot.com/
21 Apr 09, 06:43
kaungkinpyar: ချစ်မမ၊ မမသီရိ ရောက်သေးဘူးလား ၊လွမ်းလို့
21 Apr 09, 06:29
21 Apr 09, 04:37
21 Apr 09, 04:36
မိုးစက်အိမ်: ရဟန္တာ ကောင်းကင်ကကြွနေသည်ကိုဖူးချင်သူမျ
20 Apr 09, 19:36
JulyDream: အပျော်လွန်သွားရှာပြီ ထင်တယ်။ ၀ါ မ၀င်ခင် ကြိုးစားနေသလားပဲ။ အဟိ
20 Apr 09, 03:51
JulyDream: အလည်တခေါက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
18 Apr 09, 20:57
ဖြိုးဝေတိုး: တီတီသီရီ လည်လည်ရောက်လာပါ၏
18 Apr 09, 03:21
Win Zaw: မင်္ဂလာပါ၊ ရောက်လာ ပါတယ်၊ ချမ်းမြေ့ ပါစေ
18 Apr 09, 02:36
ဂင်ကြီး: ငါ့ညီမရေ ပြန်ရောက်ပြီလားဟေ့
ဂျပန်ကောင်လေး: မမသီရိရေ.. လာလည်ပါတယ်... နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျားးးးးးးးးးးးးျးျ
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: မမသီရီရေ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါခင်ဗျာ
17 Apr 09, 14:39
နှင်း: မမရေ ရောက်သေးဘူးလား။
17 Apr 09, 07:56
မိုးခါး: မမရေ .. မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေနော် ..း)
17 Apr 09, 07:02
kaungkinpyar: မမ ပြန်မရောက်သေးဘူးလား၊ လွမ်းလို့
17 Apr 09, 06:41
17 Apr 09, 06:07
နန်းစုစုမောင်: ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှစပြီး ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာ အဖြာဖြာတို့နှင့် ပြည့်စုံပါစေရှင့်။
17 Apr 09, 04:00
ညလေး: မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မမသီရိရေ.. ပထမဆုံးရောက်ပါတယ် နှစ်သစ် လက်ဆောင်လေးပေါ့..
16 Apr 09, 09:29
16 Apr 09, 08:44
16 Apr 09, 07:45
vanko: နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
16 Apr 09, 04:37
reenoemann: ကဲ ဘော်ဘော် တို့ရေ ဒီ နေ့တော့ မဟာသင်္ကြန် ရဲ့ အတက်နေ့နောက်ဆုံးပါ။ ခဲလေးသမျှ သဲရေမကျရအောင် လို့ စတင်လို့ရေးလောင်းနေပါပြီ။ မြန်မာချိန် ၁၂ထိ ကဲနေပြီဗျို့
16 Apr 09, 02:37
မိုးသောက်(ရှမ်းလေး): ရေလာလောင်းတာ.. ဗွမ်း... ဗွမ်း....
14 Apr 09, 19:19
14 Apr 09, 09:07
ချိုသင်း: မမရေ ပိတောက်ရနံ့တွေ ရင်နဲ့အပြည့် ရှိုက်သွားပြီ။
14 Apr 09, 07:37
နှင်း: ဒီအချိန်ဆို မမသီရိတစ်ယောက် စတုဒီသာတွေစားပြီး ပျော်နေပြီလား။
13 Apr 09, 23:40
ဝေါသားလေး: သက်ရောက်မှုတဲ့... မမသီရိရေ.... အားတဲ့အချိ်န်လာခံစားကြည့်ပါအုံး.....
ပြည့်စုံ: သူလည်း စကယ်ဂျူးနဲ့ဆိုတော့ ကျနော်လည်း... စကယ်ဂျူးနဲ့ ရေပုံမှန်လောင်းနေခဲ့တယ်နော်... ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေဗျာ...
13 Apr 09, 16:45
vanko: မမသီရိကို ရေလာလောင်းတာ.. လူကမရှိဘူးတဲ့။. ပြန်ရောက်မှပဲ အိုးမဲသုတ်တော့မယ်နော်။
13 Apr 09, 07:51
လင်းဒီပ: အစ်မကို ရေလာလောင်းတယ်ဗျာ...ဗွမ်း...
13 Apr 09, 05:45
လူလ: နှစ်သစ်တွင် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
12 Apr 09, 22:32
ဂင်ကြီး: ငါ့ညီမရေ နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါနော
12 Apr 09, 21:56
Dream: ရေလာလောင်းတာ... ဟဲဟဲ.. ထွက်မပြေးနဲ့နော်..
နှင်း: မမရေ ရခိုင်မုန့်တီနော်။ သတိရနေတယ်။
12 Apr 09, 08:54
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: မမသီရီ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ
12 Apr 09, 06:01
12 Apr 09, 05:16
kaungkinpyar: ရေလာလောင်းတယ် မမ
12 Apr 09, 03:46
ဂင်ကြီး: ငါ့ညီမရေ သင်္ကြန်လာလည်ပါအုံး
12 Apr 09, 03:08
မေ့သမီး: မမကို ရေလာလောင်းတယ်။
11 Apr 09, 22:13
မိုးသောက်(ရှမ်းလေး): လာလည်ပါတယ်မမရေ.. ပျော်ရွှင်စရာ သင်္ကြန်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ...
11 Apr 09, 03:36
မနောသား: ရောက်ပါတယ် အမ ..မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ...
11 Apr 09, 01:51
မေ့သမီး: ပျင်းနေတာလား။ အလုပ်ရှုပ်နေတာလား။
မေ့သမီး: မမ အသစ်လည်း မတင်သေးဘူး။
10 Apr 09, 23:09
နေစိုးနိုင်: မမသီရိ ကဗျာလေး လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ
10 Apr 09, 18:02
ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ်: မမသီရိရေ.. မင်္ဂလာပါဗျို့..
10 Apr 09, 09:29
ThihaThit: good luck ပါနှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
ThihaThit: မမသီရီရေ လာလည်ပါတယ်ခင်ဗျာ
10 Apr 09, 09:23
kaungkinpyar: ချစ်မမ နေကောင်းလား၊ လာလည်တယ်
10 Apr 09, 06:29
လွင်ပြင်ထဲက ဝဏ္ဏ: စင်္ကာပူသကြန်လညလာအုံးနော်
9 Apr 09, 20:29
ဆောင်းယွန်းလ: လာလည်သွားပါတယ်မသီရိရေ...အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
9 Apr 09, 19:26
ပြည့်စုံ: မမသီရိ.... သင်္ကြန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလားဗျ.... ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ... သူများပျော်လို့မပျော်နိုင်သေးဘူးဗျာ... ခံစားမှုတွေစုံနေတယ်.....
9 Apr 09, 18:37
9 Apr 09, 08:56
vanko: အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ။ အခု Tom Sawyer ကိုတင်ပေးထားပါတယ်။ ဖတ်ချင်ရင် လာဒေါင်းနော်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
9 Apr 09, 07:50
ThihaThit: မမသီရိစ် နေကောင်းလားစ် ဂွဒ်လပ်
9 Apr 09, 02:39
blackdream: microsoft word ထဲမှာတော့ အရှည်တွေရှိတယ် အစ်မရေ..။ တစ်နေ့နေ့တော့ အခွင့်သင့်ရင် စာမျက်နှာတွေပေါ် ရောက်ကောင်းပါရဲ့..။
9 Apr 09, 00:59
minneainphyu: မမရေ မင်္ဂလာပါ ၊၊ လာပြီးတော. စာဖတ်သွားတာကျေးဇူးပါ ၊၊ Comment လေးပါပေးသွားတာ ရော ၊၊
8 Apr 09, 21:42
မိုးချိုသင်း: မမရေ အကြွေးဆပ်ပြီးပါပြီ။ စာလုံးတွေ ထပ်နေလို့ ဒုက္ခများနေတာ။ ခေတ်မီနည်းပညာတွေကလဲ ခက်ပါ့ မမရယ်။
8 Apr 09, 19:17
ပြည့်စုံ: မမသီရိရေ... တစ်ခု ကဗျာသီးသန့်ဘလော့ဘ်လေးပါ... ကျနော်က ကဗျာကို အရမ်းနှစ်သက်တယ်လေ.. ဒါကြောင့် သီးသန်းလေးဖွင့်ထားတာပါ...။
8 Apr 09, 19:05
ဆန်းဝင်း: ရောက်ပါတယ် ဗျာ.... လာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော် . ကျနော် မသိလိုက်ဘူး နောက်ကျသွားတယ်......
8 Apr 09, 19:04
ပြည့်စုံ: မမသီရိ.... သင်္ကြန်ဆိုသည်မှာ....
8 Apr 09, 18:45
CanadaMyanmar: လွမ်းရပါ သည် ဂျာမဏီ
8 Apr 09, 07:52
8 Apr 09, 05:48
reenoemann: နောက်အားရင်းလည်း စာလာစစ်ပေးပါအုံး အမရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. လိုအပ်တာရှိရင်လည်းမှာစားပေးပါအုံး အဲမှားလို့မှားလို့ မှာကြားပေးပါအုံးဗျာ။
8 Apr 09, 03:49
reenoemann: ပြင်ထားပြီးပါပြီအမရေ။ ဒီတစ်ခါ ထပ်မှားရင် တော့ သေသင့်နေပါပြီ နော်
8 Apr 09, 02:04
နှင်း: မမရေ သူ့ကြောင့် လာကြည့်တယ်။ မတွေ့ဘူး။ဘယ်ရောက်နေတာလဲဟင်.
7 Apr 09, 18:45
တလနွန်: အမဆိုဒ်ကို လင့်လုပ်မယ်နော်
7 Apr 09, 18:38
တလနွန်: အမရေ ဒိတ်မှားနေတာလား ၇ ရက်နေ့ မဟုတ် ၈ ရက်နေ့ နော် ဒီနေ့ 
7 Apr 09, 18:37
တလနွန်: နေတတ်သလို ကိုဖတ်သွားပါတယ် ခွန်အားရှိစေပါတယ်
7 Apr 09, 18:35
Win Zaw: နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေ
7 Apr 09, 18:34
Win Zaw: မင်္ဂလာပါ၊ လည်လည် ရောက်ပါတယ်
7 Apr 09, 17:54
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: လင့်ပါခင်ဗျာ။ ဆောရီးပါဗျာ
7 Apr 09, 17:26
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: မမသီရိ ကဗျာလေးအတွက်တကယ့်ကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါခင်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ
မေ့သမီး: ဒီပုံကျတော့ ရတယ်။ ဟွန်း
မေ့သမီး: ဟာ ဘာပုံမှလည်း တင်မရဘူး။
မေ့သမီး: @[smiley: Easter egg painting: [8/8_3_43]]
7 Apr 09, 08:41
မေ့သမီး: မမရဲ့ကဗျာအပေါ်ဆုံး နှစ်ပိုဒ်ကို g-talk message လုပ်ထားတယ်။
7 Apr 09, 08:16
နှင်း: မမရေ လာချောင်းတာနော်။ ဘာတွေလုပ်နေလဲ။
7 Apr 09, 07:06
မေ့သမီး: ငိုစရာတွေ့လို့ ငိုလိုက်တယ်နော်။ ရင်ထဲခိုက်အောင်တော့ မဟုတ်ပါ ဘူး။
7 Apr 09, 07:05
ThihaThit: မမသီရိ ပို့စ် အသစ်ဘယ်ရောက်နေလဲ
7 Apr 09, 06:59
7 Apr 09, 06:58
7 Apr 09, 06:19
reenoemann: မမသီရိ ရေ စာလုံးပေါင်း ပြင်ပြီးသွားပါပြီ။ follower လည်းလုပ်သွားပါတယ်. ၉တန်းတောင် မအောင်တဲ့ ကျွန်တော် ကို စလုံးပေါင်း အမှားများ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ.
7 Apr 09, 06:09
စိတ်စမ်းရေ: စတိတ်ရှိုးလားလို့ လာကြည့်တာ.....
7 Apr 09, 05:11
kaungkinpyar: မမရေ လာလည်တယ်
7 Apr 09, 03:57
ဂျပန်ကောင်လေး: မမသီရိရေ.. စာတွေဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ...တမျိုးလေးပဲ... ဗဟုသုတလည်းရတယ်..
6 Apr 09, 23:09
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: မမသီရီ = mamathiri ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာ။ မနေ့ကလင့်မပေးခဲ့လို့ ဒီနေ့ပြန်လာနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
6 Apr 09, 22:54
JulyDream: Tag အကြွေး ဆပ်ပြီးကြောင်း သတင်းပို့ပါတယ်။
တလနွန်: အမေ ကဗျာကို လာခံစားသွားပါတယ်
6 Apr 09, 20:01
ဆင်ဖြူရှင်: Good Website http://www.photayokeking.org
6 Apr 09, 17:00
မိုးခါး: မမရေ အလည်လာတယ် .. အလှပြင်ပေးပါ
6 Apr 09, 09:06
reenoemann: လာလည်သွားတယ် မမသီရိ ရေ
6 Apr 09, 08:13
ကျော်သိင်္ခ: မမသီရိရေ၊ ဆန္ဒရှိတဲ့အဟောင်းလေး ကို လာပြီး ခံစားသွားပါတယ်။
6 Apr 09, 05:30
ThihaThit: thanks good luck
6 Apr 09, 05:29
ThihaThit: မမသီရီရေ ခဏနေမှ အသစ်တင်မှာ နော်
6 Apr 09, 05:03
6 Apr 09, 04:52
K: မမသီရိရေ- အဲလိုလား။း) အဟောင်းတပုဒ်ပေါ့နော်။
6 Apr 09, 03:19
MI MI MAUNG: I visit to your blog.
6 Apr 09, 00:27
ကြယ်စင်မင်း: ကျွန်တော်ရောက်ပြီး အမရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်သွားပြီး ခံစားသွားခဲ့ရပါတယ်.. အမေများအလားလုံး ချမ်းမြေ့ပါစေ
ကြယ်စင်မင်း: ထပ်တူ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ
ကြယ်စင်မင်း: ထပ်တူ စိတ်မကောင်းပါဘးဗျာ.. အိမ်အလည်လာခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါနော်
5 Apr 09, 22:49
ကြယ်စင်မင်း: ရောက်ခဲ့ပါတယ် မမသီရိ
5 Apr 09, 21:47
5 Apr 09, 19:58
demonstriker: I have to say goodbye for my pocket money. ahhhh wahhhh
5 Apr 09, 19:57
demonstriker: mother board is over heated and gone.
demonstriker: ma ma, my laptop is still waiting for dell services.
5 Apr 09, 19:31
မိုးခါး: မမရေ ရေကြောက်ရင် အိုးမဲသုတ်မယ် :p
5 Apr 09, 19:23
Welcome: တောင်ကြီးမာပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ သင်္ကြန်ပြီးမှ ပြန်ရောက်ပါမယ်
5 Apr 09, 19:18
မင်းလွမ်းနောင်: မမသီရီရေ အလည်ရောက်ပါတယ်
5 Apr 09, 18:22
kaungkinpyar: မောနင်း ချစ်မမ သီရိ
5 Apr 09, 18:01
မိုးခါး: မမသီရိရေ .. ၀ါသနာလေးတွေ သိသွားဘီ
5 Apr 09, 17:50
Welcome: မောနင်းပါ မမသီရီ၊ အိမ်လည် ရောက်ပါတယ် (ကော်၂လည်း မတိုက်ဘူး)
5 Apr 09, 12:05
5 Apr 09, 11:59
5 Apr 09, 11:50
blackdream: Follow သွားတယ်အစ်မရေ..။ သူများနောက်က လိုက်ရဖို့ဆိုရင်တော့ နိုးတူးပဲ..။ ဟီး ဟီး သတ္တိတွေ သတ္တိတွေပြနေတာ
5 Apr 09, 08:39
reenoemann: အမရေလာလည်ပြီးဖတ်ရှုသွားပါတယ်အဆင်ပြေရင် ဒီ ဆိုဒ် www.reenoemann.blogspot.com ကို လာလည်ကျပါ ဗျို့
5 Apr 09, 08:22
5 Apr 09, 07:40
မနောသား: အမ .. ကျွန်တော် မေးလ်ပို့ထားတယ်နော် ..
5 Apr 09, 05:21
ThihaThit: လာနှုတ်ဆက်တာပါ မမသီရိရဲ့ အသစ်က အာရုံမရသေးလို့ပါ
5 Apr 09, 03:43
ThihaThit: မမသီရီ good luck
5 Apr 09, 01:51
5 Apr 09, 01:12
5 Apr 09, 00:14
Welcome: မင်္ဂလာပါ၊ အိမ်လည် လာသွားတယ် အစ်မ
4 Apr 09, 23:25
မင်းအိမ်ဖြူ: မင်္ဂလာပါ ၊၊ လာလည်ပါ တယ် ၊၊
4 Apr 09, 10:15
Better Tomorrow: မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။
4 Apr 09, 10:09
kaungkinpyar: မမ လည်လည်ရောက်
4 Apr 09, 01:31
demonstriker: ma ma,long time no see . I miss you wahhhhhhh ahhhhhhhh wahhhhhhh
4 Apr 09, 01:19
JulyDream: ၀ါသနာတွေကို လာဖတ်သွားပါတယ်။
3 Apr 09, 22:54
ThihaThit: အအေးလာတိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ (မောမှာစိုးလို့)
ThihaThit: မမသီရိရေ ၂ ခေါက်လာလည်သွားတာ thanks
3 Apr 09, 21:14
ဆောင်းယွန်းလ: ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ မသီရိရေ
3 Apr 09, 20:14
စိုင်းခမ်းထွန်း: မသီရီ .. အလည်ရောက်ပါတယ်ဗျာ
3 Apr 09, 18:37
ThihaThit: လာလည်good luuck ၀ါသနာဖတ်
3 Apr 09, 18:36
3 Apr 09, 06:03
လူလ: မင်္ဂလာပါ မမသီရိ။ ရောက်လာ ဖတ်ရှု့သွား၏။ ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း အမြဲရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
3 Apr 09, 01:42
ko pyeaye: လာလည်သွားပါတယ်
2 Apr 09, 22:09
ကျော်သိင်္ခ: မမသီးရိရေ။ အလည်လာပါတယ်။ ကျနော့်အိမ်ကို လာမလည်တောတောင်ကြာပြီနော်။
2 Apr 09, 21:04
စိတ်စမ်းရေ: နေကောင်းပါစ အစ်မ
2 Apr 09, 12:57
ဖြိုးဝေတိုး: မမသီရီဆိုတာ ကြားဖူးလို့စဉ်းစာတာ ကလေးလို့ ခေါ်ဖူးတဲ့ တယောက်မှန်း အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။ လည်လည်ရောက်လာပါတယ် ခင်ဗျာ
2 Apr 09, 08:23
ဂင်ကြီး: ငါ့ညီမရေ ရောက်တယ်ဟေ့
2 Apr 09, 05:49
ThihaThit: မမသီရိရေ လာလည်ပါတယ်
1 Apr 09, 23:16
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: မမရေ.. အချစ်များစွာဖြင့် TAG မိပါ၏
1 Apr 09, 22:28
မောင်မျိုး: မမရေ့...သင်္ကြန်ကျတော့မယ် ရေလာလောင်းမယ်နော့်း)
1 Apr 09, 19:06
ဝေါသားလေး: လာမခေါ်သေးလို့လား..... ပျောက်နေတယ်...
31 Mar 09, 22:59
SAW: ပန်းချီ လာဝိုင်းကူဆွဲပေးပါအုံး
31 Mar 09, 17:28
31 Mar 09, 08:54
မင်းလွမ်းနောင်: အလည်ရောက်တယ် မမသီရိရေ
31 Mar 09, 06:09
31 Mar 09, 06:08
demonstriker: my laptop is gone bcoz of graphic card
31 Mar 09, 05:37
အဇ္ဈတ္တပြခန်း: နေရာသစ်မှာ လင့်ခ်ထားပါကြောင်း
31 Mar 09, 03:24
31 Mar 09, 02:58
စိတ်စမ်းရေ: မမသီရိ ရောက်တယ်နော်.....။
31 Mar 09, 02:49
Khine Bo Bo: ဘာတွေရှိလဲလို့ လာကြည့်သွားပါတယ်
30 Mar 09, 21:42
ဂင်ကြီး: သမီးလေးတွေကမယ်တဲံ ညီမရေ
30 Mar 09, 18:55
မင်းလွမ်းနောင်: မမသီရီ အသစ်လေးတွေ ရေးဦးလေ...
30 Mar 09, 09:08
K.K.K: မင်္ဂလာပါ မလာဖြစ်တာကြာပြီ ဒီရက်အားတော့ လာရောက်ဖတ်သွားပါတယ် ပျော်ရွင်ပါစေ
30 Mar 09, 08:47
ThihaThit: မမသီရိရေ ပျောက်နေပါလား နေမကောင်းလို့လား မအားလို့လားခင်ဗျာ
30 Mar 09, 03:35
Welcome: မင်္ဂလာပါ၊ လည်လည် ရောက်ပါတယ်
29 Mar 09, 23:56
kaungkinpyar: မမ ခေါ်တယ်နော်
29 Mar 09, 19:21
demonstriker: ma ma, morning
29 Mar 09, 18:22
ဝေါသားလေး: မမသီရိရေ... ပျော်ရွှင်မိပါတယ်.. ဒီပို့စ်လေးအတွက်....
29 Mar 09, 18:08
မိုးခါး: မမသီရိ လာလည်တယ်နော် ..း)
29 Mar 09, 07:17
S-C: မမသီရိရေ ၀ါသနာလေးတွေလေ...ရေးပေးမလား...ဟေ
29 Mar 09, 04:11
29 Mar 09, 01:58
မေ့သမီး: မမ လာလည်တယ်။
29 Mar 09, 00:39
mikozan: http://www.mikozan.co.cc/လိုခြင်တာရှိရင် လာခဲ့ ပါ ရဲ တော့ ခေါ် မလာပါနဲ့နော်
28 Mar 09, 23:50
28 Mar 09, 23:49
demonstriker: မမ မ ကျောက်တုံးကြီးကိုမ၊
မင်းလွမ်းနောင်: ဟွန့်... ကဗျာဖတ်ချင်တာကို အသက်ပြည့်သွားလို့ ဖတ်လိုက်ရဖူးကွာ..........၊ လူကြီးဖြစ်တာ ဘာအသုံးဝင်သလဲကွာနော်
28 Mar 09, 19:23
mikozan: ဖတ်မလို့ လာတာပဲ အသက် ကြောင့် မဖတ်သွား ရဘူး
28 Mar 09, 05:39
ဂင်ကြီး: ငါ့ညီမရေ ဘယ်သူ့ကိုစိတ်ကောက်လဲဟေ့ ဟေးးးးး
28 Mar 09, 05:03
tune: ၁၆ နှစ်ကို ၂၁ လေးပဲ ကျော်သေးလို့ ဖတ်သွား
28 Mar 09, 04:27
သီဟသစ်: good luck
သီဟသစ်: မမရေ လာလည်မန့်ပြန်ုလုပ်သွားပြီ
vanko: မင်္ဂလာပါ မမသီရိ။ အလည်လာပါတယ်။ သူရဲကောင်း ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်။
· 1 – 95 ·
Posted by မမသီရိ at 5/02/2009 07:54:00 PM